सहायता सेवाहरू - द्विभाषी शिक्षा संस्थान
घर शरणार्थी, एसिलीज, एसआईवी, र बेचबिखनको शिकारका लागि अंग्रेजीसमर्थन सेवाहरू
संयुक्त राज्य अमेरिकाको नयाँ आगमनको रूपमा, अ English्ग्रेजी सिकेर तपाईंलाई नयाँ घर र तपाईंको नयाँ समुदायमा जडान गर्न मद्दत गर्दछ। BEI मा हाम्रो लक्ष्य तपाइँको आफ्नो अमेरिकी सपना प्राप्त गर्न मद्दत पुर्‍याउनु हो र तपाइँलाई सब भन्दा शक्तिशाली उपकरणहरू प्रदान गरेर कुनै पनि अवरोधहरू पार गर्न। हामी तपाईलाई अ for्ग्रेजी सिकाउँदछौं तपाईलाई समुदाय र कामको लागि चाहिन्छ। यदि अ English्ग्रेजीको कक्षा लिने विचार यथार्थपरक देखिदैन भने, समर्थन सेवाहरू विचार गर्नुहोस् जुन हामी तपाईंको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछौं।
रोजगारी खोज्नु तनावपूर्ण हुन सक्छ, विशेष गरी जब तपाई अमेरिकामा नयाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो छात्र सल्लाहकार यहाँ छन् तपाइँलाई आफ्नो क्यारियर पथ पूरा गर्नका लागि चरणहरू पूर्ण गर्न सहयोग र मद्दत गर्न। कहिलेकाँही यसको मतलब अमेरिकामा तपाईंको जीवन लामो क्यारियर जारी राख्नु हो। अन्य समय, यसको मतलब नयाँ क्यारियर लक्ष्य खोज्नु हो। हाम्रो क्यारियर सल्लाह सेवाहरूले प्रशिक्षण अवसरहरू पहिचान गर्न, लेखन पुनः सुरु गर्न, अंग्रेजी भाषा कक्षा, रोजगार कौशल वर्गहरू, र अधिक बढि मद्दत गर्दछ!
अनुवाद / व्याख्या
BEI ले कक्षा समयमा बच्चाको हेरचाह प्रस्ताव गर्दछ, ताकि आमा र बुबाले अंग्रेजी सिक्न जारी राख्न सक्नुहुनेछ जब कि उनीहरूको हेरचाह गरिन्छ।
BEI तपाईको भाषा प्रदायक हुन सक्छ, तर के तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँले समुदायमा अन्य संसाधनहरू फेला पार्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? BEI मा एक विद्यार्थीको रूपमा, तपाईं समर्थन को एक ठूलो नेटवर्क को हिस्सा हुनुहुन्छ। हामीलाई कुनै प्रश्न सोध्न संकोच नगर्नुहोस्। हामी तपाईलाई अन्य शरणार्थी सेवा प्रदायकहरु लाई रोजगार समर्थन, आवास आवश्यकता, GED तयारी, इत्यादिका लागि सन्दर्भित गर्न सक्दछौं। हामीले वर्षौंको सामुदायिक नेटवर्क पनि विकास गरेका छौँ। अधिक जान्नको लागि BEI को विद्यार्थी सल्लाहकारलाई भेट्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस्।
हामी सबै भाषा सिक्नेहरू हौं र हामी यो जान्छौं कि यसले सिकारु सिकारु हुन कस्तो महसुस गर्दछ। समयमा आवश्यक पर्दा, हाम्रो विविध कर्मचारी र संकायले तपाईंको मातृभाषामा मद्दत गर्न सक्दछन्। हामीसँग अरबी, चिनियाँ, फारसी, फ्रान्सेली, हिन्दी, जर्मन, गुजराती, जापानी, कजाख, किन्यारवाण्डा, किरुन्डी, कोरियाली, कुर्द, पोर्तुगाली, पंजाबी, रोमानियाई, सर्ब-क्रोएसियाई, पश्तो, स्पेनिश, स्वाहिली, तागालोगमा भाषा समर्थन छ। , टर्की, उर्दू, भियतनामी, र योरूबा।
जब तपाईं नयाँ शहरमा जानुहुन्छ, कहिलेकाँही सडकहरू सिक्नको लागि केहि समय लाग्छ र खोजी गर्न सहज हुन्छ। यस कारणले गर्दा, हामी हाम्रो घरको नजिक हाम्रा कक्षाहरू प्रस्ताव गर्दछौं, हिंड्न सजिलो स्थानमा। यदि तपाईं सार्वजनिक यातायात संग सहज हुनुहुन्छ, तपाईं हाम्रो क्याम्पसमा एक कक्षा लिन सक्षम हुन सक्नुहुन्छ। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थी टोकनहरू बीआईआईमा आउनको लागि उपलब्ध छन्।
अमेरिकी नागरिकताको लागि आवेदन दिँदै?
बीआईआई सीसीटी ह्युस्टन मार्फत नि: शुल्क अमेरिकी नागरिकता तयारी कोर्सहरूको लागि योग्य ग्राहकहरूलाई सन्दर्भमा मद्दत गर्दछ।
कक्षाहरू अ learn्ग्रेजी सिक्नेहरूका लागि हुन् र विद्यार्थीलाई नेचुरलाइजेशन अन्तर्वार्ता, अंग्रेजी र युएस सिभिक्स / इतिहास परीक्षाको लागि तयार गर्ने कुरामा केन्द्रित छन्। साक्षात्कार अभ्यास गर्नुहोस्, परीक्षण गर्नुहोस्, र अंग्रेजी सिक्नुहोस् सफल हुनको लागि। सफल पूर्तिकर्ताहरूले क्याथोलिक परोपकारी संस्थाबाट उनीहरूको प्राकृतिकीकरण प्रक्रियाका लागि कानुनी सहायता र प्रतिनिधित्वमा पहुँच प्राप्त गर्दछन्।
नागरिकता तयारी कोर्स मा अधिक जानकारी अनुरोध गर्नुहोस्
कृपया टाइप गर्नुहोस् २ ताकि हामीलाई थाहा छ तपाईं वास्तविक हुनुहुन्छ
हामी संग स्वयंसेवक!
अ Language्ग्रेजी भाषा शिक्षाको क्षेत्र एक वास्तविक विश्वव्यापी क्षेत्र हो जुन घरमा विभिन्न संस्कृतिहरूको घरमा काम गर्ने वा विश्वको शिक्षण र नयाँ व्यक्तिहरूलाई भेट्ने अवसरहरू छन्। चाहे तपाई घरमा सिकाउन चाहानुहुन्छ वा विदेश भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ, BEI ले तपाईलाई एक पेशेवर अंग्रेजी भाषा शिक्षक बन्न आवश्यक प्रशिक्षणको साथ मद्दत गर्न सक्छ।
हाम्रो स्वयम्सेवक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम उम्मेदवारहरूलाई सफल अंग्रेजी भाषा शिक्षक बन्न सहयोगको लागि प्रदान गरीएको हो:
प्रभावशाली अंग्रेजी भाषा निर्देशनका लागि आधारभूत सुझावहरू र प्रविधिहरू।
सबै उमेर र स्तरका विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराउन शिक्षण विधिहरू।
कक्षा कोठा व्यवस्थापन र विभिन्न स्तरहरूको लागि पाठ योजना रणनीति।
इएल ट्रेन्ड्स, ब्लेन्ड्ड लर्निंग, र कम्युनिकेटिभ रणनीतिहरूमा पछिल्ला अभ्यासहरू।
देश र विदेशमा सिकाउन रुचि नयाँ EL शिक्षकहरूको लागि व्यावहारिक कार्य अनुभव।
त्यसोभए यदि तपाइँ अंग्रेजी भाषा शिक्षामा क्यारियरको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँको अभ्यास पूरा गर्नु आवश्यक छ, वा विश्वभर यात्रा र काम गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँको इल क्यारियर सुरु गर्न बीईआईलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।